PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - Kuningi okungafundwa emngcwabeni
Kuningi okungafundwa emngcwabeni
Ilanga langeSonto - 2018-09-09 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
INKONZO yomngcwabo ka-aretha Franklin ifane nemvuselelo endimeni yomculo emhlabeni wonke jikelele, kwatolikeka kahle negama elithi “umculo” njengoba sesalaleliswa izimanga zodwa.
Namuhla nabakhwehlelayo nabaqumayo bathi bayacula. Empeleni umculo yilapho kusuke kusetshenziswa khona iphimbo ngendlela noma lixutshwe nezinsimbi. Lokhu esesikuzwa namuhla kumele ngabe sithi silalele isigqi sawo umculo nesingathi nje ama-afrika yiwo ayaziwa ukuthi amandla kuso, eshaya izigubhu kusinwe ngezindlela ezahlukene.
Lo makadebona waduma ngezingoma zowokholo nezomphefumulo ngendlela enobuciko eminyakeni eminingi kusuka ngeyama-1960. Ubeyintokazi eyenza izinto ngendlela ehlelekile engasishintshanga isitayela sokucula yize ibisineminyaka engama-76 yobudala.
Abaculi abafana no-stevie Wonder noGladys Night nabanye abaningi abasezingeni lo mhlaba bebetheleke ngezinkani. Emhlabeni wonke jikelele siye savuseleleka sibuka indlela okusetshenzwa ngayo kwezomculo. Isikhathi besigcinwa phakathi kwabaculi uma bezongena esite- ji, ingekho lento yokuthi kulindwe ikwaya noma umculi eseza esiteji ekubeni kade azi ukuthi usezolandela. Indlela yokuziphatha esiteji ibiphezulu ngokunjalo nokusethwa kahle kwezinsimbi bekungenziwa phambi kwabantu.
Onjiniyela bemisindo bebenze isiqiniseko sokuthi kuqopheka kahle konke.
Kuleli lakithi sisamelwe wukufundiswa izindlela zokuziphatha emicimbini nasemingcwabeni. Kakufanele ukuthi uma umculi eqashiwe kuthathwe ngokuthi uyazi ngoba izindawo kazifani.
Kubalulekile ukuba abaculi abasuke bezocula bafike ekuseni kungakafiki muntu ukuze babone kahle isimo sendawo nalapho bazobe bemi khona ukuze kulungiswe nemibhobho abazocula ngayo nakho konke abazokudinga ukuthi kuyasebenza yini.
Kuyaphoxa uma iqembu elinamalunga amaningi selifika esiteji lihlola imibhobho ukuthi iyasebenza yini phambi kwabantu.
Kuvele kube yisifece kakhulu umuntu esezomemeza kakhulu esho o “mic-check, check, check”.
Abanye uze ubabone sebekhomba unjiniyela womsindo ngezandla bekhononda ukuthi abezwakali phakathi kwabantu. Yonke leyonto kumele yenziwe kungafiki izethameli zokwenzekayo.
Ngihlala njalo ngikhumbuza abafundi bethu ngesihlabani somculo we- reggae
esingasekho emhlabeni upeter Tosh efike eswazini. Ngafunda isifundo lapho sokuthi kuvukwa ngovivi kuzosethwa izigingci, nokubheka ama- microphone.
Lesi sihlabani safika ekuseni sahlola onke amalunga ebhendi aso ukuthi awabugaxile yini, maqede sathi akudlalwe ingoma eyodwa sazenelisa sase sibeka onogada abaqapha izinsimbi ukuze kungabibikho noyedwa ozogibela esteji agange.
Wabuya lapho engasadle nkobe zamuntu kwasha ingoma phezu kwengoma, waqeda wakhala amaphepha nabantu baphuma kanye naye.
Wakhala ubrenda Fassie weza kimi kwehla izinyembezi wathi, “Mara uyayibona le ndoda ihamba nabo bonke abantu ngisazoculela bani mina?”
Ngempela ngakusasa kwaqala yena kwase kulandela utosh. Wamtshela ngayizolo ukuthi angabophinde acule emuva kokuba kade kucula “ibhubesi”. Awubuye umculo womphefumulo siyawudinga kakhulu .